ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » ကနေဒါ Breaking News » Atlantic Canada သည်အမေရိကန်ခရီးသွားများအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ဖွင့်လှစ်သည်
လေကြောင်းလိုင်း • လေဆိပ် • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • ကနေဒါ Breaking News • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ • သတင်း • ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း • တာဝန်ရှိသော • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • USA မှ Breaking News • သတင်းမျိုးစုံ
ကနေဒါနယ်စပ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကြေငြာချက်အပြီး၊ အတ္တလန္တိတ်ကနေဒါမှပြည်နယ်များသည် ၂၀၂၁၊ သြဂုတ် ၉ ရက်မှစ၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသောအမေရိကန်ခရီးသွားများအတွက်အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။
နယူး Brunswick သည်ကနေဒါအစိုးရမှလက်ခံသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုအပြည့်အဝရရှိသောအမေရိကန်ခရီးသွားများအားကြိုဆိုလိမ့်မည်။
သြဂုတ်လ ၉ ရက်မှ စ၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသောအမေရိကန်ခရီးသွားများအားနယူးဖောင်လန်နှင့်လဗရာဒေါန်သို့ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
သြဂုတ်လ ၉ ရက်မှစ၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်ခရီးသွား as ည့်သည်များအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအမေရိကန် visitors ည့်သည်များသည် Nova Scotia သို့ဝင်ရန်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။
အတ္တလန္တိတ်လေးပြည်နယ် ကေနဒါ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၉ ရက်မှစတင်ကာကာကွယ်ဆေးထိုးထားသောအမေရိကန်ခရီးသွား to ည့်သည်များကိုဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Maine ၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးအတ္တလန္တိတ်ကနေဒါသည်လူအုပ်စုနှင့်ကင်းလွတ်ပြီးကနေဒါပြည်နယ် ၄ ခုမှ New Brunswick၊ Nova Scotia၊ Newfoundland & Labrador နှင့် Prince Edward Island တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
သြဂုတ်လလယ်တွင်နယ်စပ်ဖွင့်လှစ်မှုကြောင့်အမေရိကန်ခရီးသွားများအတွက်ရာသီဥတု၊ ပူနွေးသောကမ်းရိုးတန်းရေပြင်နှင့်ပြင်ပမှစွန့်စားခန်းများကမ်းလှမ်းသည့်အတ္တလန္တိတ်ကနေဒါတွင်နွေရာသီနှောင်းပိုင်း၌ပျော်မွေ့နိုင်သည်။ ကျဆုံးခြင်းသည်ရောင်စုံသစ်ရွက်များနှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအစားအစာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပွဲတော်များပါဝင်သည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်မှအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီနိုင်သည့်ဒေသသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောကမ်းရိုးတန်းများ၊ ပင်လယ်စာအသစ်များ၊ ကျယ်ဝန်းသည့်အပြင်ဘက်နေရာများ၊ မြေနှင့်ရေအတွေ့အကြုံများကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။
ခရီးသွားများအားလုံးသည်အသုံးပြုရမည် CAN ရောက်သည် သူတို့၏ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြရန် (app သို့မဟုတ် web portal) ။ ကနေဒါ၏ဖက်ဒရယ်ခရီးသွားလမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်ကနေဒါရှိပြည်နယ်တစ်ခုစီတွင်နေထိုင်သူများကို COVID-19 မှကာကွယ်ရန်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးသွားကန့်သတ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ပရိုတိုကောများသည်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကွဲပြားမှုရှိသဖြင့်ခရီးသွားများအနေဖြင့်သူတို့၏နောက်အတ္တလန္တိတ်ကနေဒါစွန့်စားမှုကိုစီစဉ်ရန်ပြည်နယ်တစ်ခုစီသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
ကနေဒါဖက်ဒရယ်နယ်စပ်ကိုသြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ပြီးသည်နှင့်နယူးဘရန်ဆစ်ခ်ျသည်ကနေဒါအစိုးရမှလက်ခံသော COVID-9 ကာကွယ်ဆေးကိုအပြည့်အဝရရှိသောအမေရိကန်ခရီးသွားများအားကြိုဆိုလိမ့်မည်။
သြဂုတ်လ ၉ ရက်မှစ၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသောအမေရိကန်ခရီးသွား New ည့်သည်များကို Newfoundland & Labrador ဝင်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးခရီးသွားလာသည့်ပုံစံကိုသူတို့မျှော်မှန်းထားသည့် ၇၂ နာရီအတွင်းတင်ပြရန်နှင့်သူတို့နေထိုင်စဉ်အတွင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခံထားရသောခရီးသွားများအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသီးခြားစီခွဲထားရန်မလိုအပ်ပါ။
မမှန်ကန်သော COVID စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအရှိန်မြှင့်စေနိုင်သည်။
အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးတိုက်ရိုက်မိုင်ယာမီသို့ ...
IATA သည်ကမ္ဘာ့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် speaker များကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Cathay Pacific လေကြောင်းလိုင်းသည် Pittsburgh သို့ပြန်လည် ...
အလို! BMW 8 Series Gran Coupe Special Edition ဖြစ်သည်
Manhattan ရှိ Pennsylvania ရှိ Hotel သည် COVID-19 ကိုအရှုံးပေးသည်
ကာကွယ်ဆေးလား? စမ်းသပ်မလား။ ဒီမှာမဟုတ်ဘူး။ ပျော်ရွှင်စရာ Koh Larn အပူပိုင်းဒေသကိုလည်ပတ်ပါ။
အာဖဂန်နစ္စတန်အတွက် Lufthansa ကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်
COVID-19 စံချိန်တင်ကာလအတွင်းဟာဝိုင်အီဟိုတယ်မှ ၀ င်ငွေတိုးလာခဲ့သည်။
St. Eustatius သည်အပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးထိုးထားသောခရီးသွားများကိုကြိုဆိုသည်
Saudia, Emirates, Etihad Airways Jamaica သို့ပျံသန်းသည်။
Denver မှမရပ်မနား Belize ပျံသန်းမှုကို Frontier စတင် |
သဲသောင်ပြင်အားလပ်ရက် Destinations များ၌လက်ရှိ COVID ကူးစက်မှု
၂၀၂၁ Oshkosh သည် EAA စီစဉ်သူများ၏မျှော်မှန်းချက်များကိုကျော်လွန် ...
တာလီဘန်တွေကကဘူးလ်ရဲ့ဟာမစ်ကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်ပြည်နယ်များအား IATA မှ IATA တိုက်တွန်း
အပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်သော Vax Rioters မုန်တိုင်း BBC London Studios
Air Canada အသစ်များတွင်မျက်နှာဖုံးများ၊ Lederhosen နှင့်ဘီယာ ...
အိန္ဒိယတွင် e-Tourist ဗီဇာများပေးခြင်း IATO ကို ...
ဘိုးအင်း ၇၃၇ ဂျက်လေယာဉ်သည်ဟာဝိုင်ယီတွင်အရေးပေါ်ရေယာဉ်ဆင်းသက်စေခဲ့သည်
Bangkok Airways တွင်ခရီးသည်များ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များခိုးယူခံရခြင်း ...
UNWTO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတစ် ဦး ကိုစွပ်စွဲခြင်းသည်သူ့ကိုတရားသူကြီးဖြစ်စေသည်။
Sandals Resorts နိုင်ငံတကာတည်ထောင်သူကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်
Italia Trasporto Aereo လေကြောင်းလိုင်းမှ Alitalia သို့ ...
အတွင်းခံဘောင်းဘီ ၇၃၀ နှင့်အတွင်းခံဘောင်းဘီသူခိုးအဖမ်းခံရ
IATA သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Mobility Aids Action Group ကိုစတင်ခဲ့သည်